Fikarohana momba ny firaisana Ny fiovan'ny lahy sy ny vavy eo amin'ny sehatry ny firaisana amin'ny lehilahy ary ny firaisan'ny samy lahy na samy vavy
Ny fikarohana momba ny gasy dia maneho fa ny fiovan'ny lehilahy dia afaka miovaova avy amin'ny fiainana iray manontolo, na dia mety ho tsy miovaova aza ny endriky ny endrika na ny rafitra endrika.
Fiovan'ny lahy sy ny vavy eo amin'ny sehatry ny zaza teraka indray, ny firaisan'ny samy lehilahy na ny samy vehivavy
Ian Stevenson MD dia nahita fa ao amin'ny andiany 1200 dia nanamarina ny trangan'ny fahatsiarovan-tanan'ny ankizy, amin'ny 10% ny tranga sisa no tratran'ny fiovan'ny lahy sy ny vavy. Raha lazaina amin'ny teny hafa, 90% amin'ny fotoana nipoitra indray tamin'ity lehilahy ity. Izany dia mijery fa ny tsirairay no manana lahy sy vavy manokana.
Amin'ny toe-javatra sasany misy fiovana eo amin'ny lahy sy vavy, ny olona dia mety mbola misy ifandraisany amin'ny maha lahy na vavy eo amin'ny fiainana talohan'ny nahaterahana, izay mety hitarika amin'ny homosexualité na lesbiana. Tranga roa mampiseho io tranga io dia ahitana:
Lehilahy japoney lahy iray dia lasa fitaovam-pananahana amin'ny maha-vehivavy azy ary lasa lesbienne: Fahatakarana ny fifanambadian'ny samy lehilahy amin'ny alalan'ny fanambadiana
Na dia tsy nisy tranga momba ny firaisana ara-nofo aza dia voarakitra an-tsoratra izay miteraka transsexualism, dia mety ho ny olona sasany izay sendikaly na manana olana momba ny maha-lahy na vavy dia milaza ny fiovan'ny fiovan'ny lahy sy ny vavy, izay mbola misy ifandraisany amin'ny maha-lahy na maha-vavy azy.
Firaisana ara-nofo amin'ny fanambadiana